युगसम्बाद साप्ताहिक - जनमतबाटै राजसंस्था फर्काइन्छ - कमल थापा, अध्यक्ष राप्रपा नेपाल
Saturday, 05.30.2020, 11:53pm (GMT+5.5) Home Contact
जनमतबाटै राजसंस्था फर्काइन्छ - कमल थापा, अध्यक्ष राप्रपा नेपाल
Tuesday, 07.30.2013, 03:32pm (GMT+5.5)
० तपाईं राजा सहितको प्रजातन्त्रले मात्र मुलुकको हित गर्छ भन्दै त्यसैमा लागिरहनुभएको छ । पछिल्लो समय राजसंस्थाका बारेमा जति पनि टीका टिप्पणी भएका छन् यसलाई कुन रुपमा लिनुभएको छ ?
यतिबेला राजसंस्थाको बारेमा जुन चर्चा परिचर्चाको कुरा छ त्यसमा केही पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँलाई के निवेदन गरौं भने केही दिन अगाडि नेपाली कांग्रेसका नेता, जो वीपी कोइरालाका छोरा हुनुहुन्छ, डा. शशांक कोइरालाले राजसंस्थाको अन्त्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो र त्यो निर्णय सच्याउनुपर्छ, सच्याइएन भने अझ ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ भन्नुभयो । त्यसको केही दिनपछि नेकपा–माओवादीका नेताहरूले राष्ट्रियताको संरक्षणका निमित्त राजा र राष्ट्रवादी शक्तिहरूसंग सहकार्य गरेर जान सकिन्छ भन्ने अवधारणा अघि सार्नुभो । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्यायो र पक्ष–विपक्षमा अनेक किसिमका विचारहरू देखापरे ।
यसले नेपालमा राजसंस्थाको सान्दर्भिकता र औचित्य अहिले पनि कायम छ भन्ने देखाउँछ । अर्कोतर्फ पूर्व राजाबाट दैवी विपत्तिमा परेका सुदूरपश्चिमका जनतालाई राहत वितरण गर्ने काममा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भयो त्यो नितान्त अनुपयुक्त कार्य हो । राहत वितरणकै सन्दर्भमा पूर्व राजाको भ्रमण हुँदाखेरी जुन किसिमले अपार जनसमुदायको उपस्थिति देखियो त्यसले एकातिर राजसंस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास व्यापक रहेको देखाउँछ ।
० राजसंस्थाका सवालमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइराला र नेकपा–माओवादीका नेताहरूबाट आएको अभिव्यक्ति गृहकार्यपछिको हो कि व्यक्तिगत मात्र हो ? यस विषयमा तपाईंहरूसंग केही छलफल भएको छ ?
अनौपचारिक रुपमा बेलाबेलामा भेट हुँदा कुराकानी भैराखेको छ । हरेक राजनीतिक पार्टीमा राजासहितको प्रजातन्त्र नै मुलुकका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नेको संख्या ठूलो छ । जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको प्रश्न छ– सो पार्टीको स्थापना नै संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको सिद्धान्तको धरातलमा भएको हो । यसका संस्थापक नेताहरूले विगतमा राजसंस्थासंग संघर्ष गर्दा पनि त्यो सिद्धान्तलाई छोडेनन् । वीपी कोइरालाले राजसंस्था रहेन भने नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा रहन सक्दैन र प्रजातन्त्र पनि कमजोर हुन्छ र वामपन्थीहरूले खाइदिन्छन् भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो । त्यही मान्यतालाई गणेशमानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले पनि जीवनको अन्तिम घडीसम्म कायम राख्नुभो । अहिले नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा ठूलो जमात राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सैद्धान्तिक विचलनले गर्दा कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र मतदातामा ठूलो हलचल नै पैदा भैराखेको स्थिति छ । यसैको परिणाम नै शशांकजीको अभिव्यक्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
० त्यसो भए राजसंस्था स्थापना गर्ने सवालमा तपाईंहरूले विभिन्न पार्टीसंग छलफल चलाइरहनुभएको छ र कमल थापाले पूर्व राजासंगै पार्टीका नेताहरूलाई भेट गराएकोसम्मका कुरा चर्चामा आएका छन् । यो सत्य हो ?
राजासंग भेटाउनका लागि मैले माध्यम हुनु जरुरी छैन । राजाको ढोका अहिले पनि सबैका लागि खुलै छ । पक्कै पनि राजा र नेताहरूका बीचमा संवाद भैराखेको होला र हुनु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जहाँसम्म राप्रपा नेपालको प्रश्न छ हामी यसलाई राजनीतिक दलहरूको तहमा पनि र आम जनताको तहमा पनि बहसको रुपमा लिएर जान्छौं । हामी के कुरामा विश्वास राख्छौं भने नेपाली जनताको अभिमतबाटै यो मान्यतालाई स्थापित गराउन सक्छौं । आगामी चुनाव भनेकै दुईवटा वैचारिक धारको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । एउटा वैचारिक धार भनेको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र जातीय आधारको संघीयता हो । यो धारको नेतृत्व एकीकृत नेकपा माओवादीले गरिराखेको छ । यो वैचारिक धारको बाटोबाट अगाडि हिंड्दा देश कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा आज देखिएको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो बाटो असफल भएको छ ।
अर्कोतर्फ यसको विकल्पमा राप्रपा नेपालले राजासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दु राष्ट्र र राष्ट्रिय अखण्डताको वैचारिक बाटो जनताका सामु प्रस्तुत गरिराखेको छ । यी दुईटा बाटोको बीचमा हामी बहस चलाउँदै जान्छौं र संविधानसभाको निर्वाचनबाट प्राप्त हुने परिणामको आधारमा राप्रपा नेपाल मात्र हैन, यो विचारधारा राख्ने अन्य दलसंग पनि एउटा सहमति कायम गरेर देशलाई ठीक बाटोमा लैजान सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
० पछिल्ला दिनहरूमा तपाईं र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीच राजतन्त्रका विषयमा फेसबुकमार्फत विगतका कुराहरू सार्वजनिक गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । यसले राजसंस्थाका विषयमा मुलुक ध्रुवीकृत हुँदै गरेको हो भन्न सकिन्छ ?
निश्चय पनि राजसंस्थालाई पाखा लगाउने बारेमा जुन किसिमले षड्यन्त्रपूर्ण काम भयो त्यो जनतालाई चित्त बुझिराखेको छैन । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा राजसंस्थालाई जनताले भोट हालेर हटाएको पनि हैन र क्रान्तिबाट भगाएको पनि हैन । बाह्य शक्तिको षड्यन्त्र र देशभित्रको उग्रवामपन्थी शक्तिको रणनीतिक योजनाबाट राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम भएको हो । राजसंस्थालाई पाखा लगाइसकेपछि न त परिवर्तन संस्थागत हुन सक्यो, न त नेपालको अवस्था विगतको भन्दा राम्रो नै हुन सक्यो । त्यसको विपरीत बाह्य शक्तिको चलखेल तीब्ररुपले बढेर राष्ट्र विखण्डनको दिशातिर बढ्न लागेको धरातलीय यथार्थका कारणले गर्दा पनि चुनावको पूर्व सन्ध्यामा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रका बारेमा बहस या ध्रुवीकरण हुनु आवश्यक पनि छ र यो स्वाभाविक पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
० तपाईंको अभिप्राय चुनावबाटै राजसंस्था स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने हो कि चुनाव विथोल्नपर्छ, त्यसका लागि नेकपा–माओवादीसंग सहकार्य गरेर जाऔं भन्ने हो ?
जहाँसम्म राप्रपा नेपालको प्रश्न छ, नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र बनाउनु पर्दछ, राजासहितको प्रजातन्त्र कायम हुनुपर्दछ र राष्ट्रिय अखण्डता सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा हामीले बोकेका छौं । यो एजेण्डालाई स्थापित गर्ने हामीहरूको बाटो भनेको प्रजातान्त्रिक, शान्तिपूर्ण र संविधानकै परिधिभित्र रहेर जनताको अभिमत नै हो । यसबाट हाम्रो एजेण्डालाई स्थापित गराउने हो । तर, यो बाटो अबरुद्ध गरियो भने स्वाभाविक रुपले हामी संघर्षमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राप्रपा नेपाल अहिले चुनावको पक्षमा छ ।
० त्यसो भए तपाईंहरू नेकपा–माओवादीले भनेजस्तो चुनाव नगरेर एउटा अन्योलपूर्ण परिस्थिति सिर्जना गरी त्यसबाट फाइदा लिनपर्छ भन्ने पक्षमा होइन ?
हामी नेकपा–माओवादीलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछौं । यो चुनाव आवधिक संसदीय चुनाव मात्र नभएर पहिलोपटकको संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधान बन्न नसकेको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएकाले कुनै पनि शक्ति वा दललाई निषेध गरेर हुने चुनावबाट सार्थक परिणाम निस्कदैन र त्यो अधुरो हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैले मोहन वैद्यजीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा–माओवादीलाई पनि ससम्मान चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्दछ । यसमा अहिले सबभन्दा ठूलो बाधा र अवरोध भनेकै चारदलीय संयन्त्र हो । चारदलीय संयन्त्रलाई तत्काल खारेज गरेर सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्न सकियो भने त्यसबाट सबैले चुनावमा भाग लिने वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० पूर्व राजा लगायतका राष्ट्रवादी शक्तिसंग राष्ट्रियता जोगाउन सहकार्य गर्ने नेकपा–माओवादीले भने पनि तपाईंहरू चुनावको विरोधमा जानुहुन्न ?
निश्चय पनि निर्वाचन राप्रपा नेपालको एजेण्डा हो । यहाँहरूलाई जानकारी नै हुनुपर्छ कि पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि म्याद थप्नु हुँदैन, यो संविधानसभाबाट जनताले चाहेको संविधान बन्न सक्दैन भनेर हामीले निरन्तर तीन वर्षदेखि संघर्ष गर्दैआएका हौं । अहिले चुनावका ठूलठूला कुरा गर्ने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले लगायतका नेताहरू त्यो बेलामा चुनावको बिरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो । केही महिना अघिसम्म पनि उहाँहरू मृत्युवरण गरिसकेको संविधानसभा ब्यूँताउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि उहाँहरू चुनावप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । बाह्य शक्तिको दवाव र देशभित्रका जनताको दवावले गर्दा बाध्य भएर चुनावको एजेण्डालाई स्वीकार्नुभएको हो । जहाँसम्म राप्रपा नेपालको कुरा छ, हामीले त जनताको अधिकार स्थापनाका निमित्त संघर्ष गरिराखेको हुँदा चुनावका निमित्त हामी तयार छौं, तयारी गरिराखेका छौं र हामी चाहन्छौं कि यो चुनावमा सबैले सहभागिता जनाउने वातावरण तयार गरियोस् ।
० तपाईंले जे भने पनि भित्रभित्रै –माओवादीसंग मिलेर चुनाव रोक्ने अभियानमा लागिरहनुभएको छ भनिन्छ नि त ?
यसमा कुनै सत्यता छैन । जुन पार्टीले चुनावका लागि यत्रो संघर्ष गर्यो अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति हुँदाहुँदै, चार राजनीतिक दलले सर्वसत्तावादी ढंगले निर्णय लादिरहेको र रमोट कन्ट्रोलबाट सत्ता चलाइरहेको हामीलाई कत्ति पनि चित्त बुझेको छैन तर चुनाव पार्टीको एजेण्डा भएको हुनाले हामीले चुनावलाई प्रयोग गर्नैपर्छ । वैद्यजीहरूलाई पनि चित्त बुझेको छैन । हामी चुनावकै माध्यमबाट चित्त नबुझेको कुरा जनतामा लैजाने पक्षमा छौं । चार दलीय सिण्डिकेटले सात वर्षसम्म गरेको मनपरी जनतालाई बताएर जनताको अभिमतबाट त्यसको विकल्प खोज्ने बाटो रोजिराखेका छौं । जहाँसम्म वैद्यजीहरूको प्रश्न छ, उहाँहरूले वहिष्कारको बाटो रोजिराख्नुभएको छ । त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो । म यहाँ के निवेदन गराउन चाहन्छु भने यदि यो चार दलीय मनपरीको अन्त्य गर्न सकियो भने वैद्यजीहरूलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउन सकिन्छ ।
० तपाईं निर्वाचनमार्फत नै राजसंस्था फर्काउँछौं भन्नुहुन्छ । यो एउटा वैधानिक बाटो हो । तर त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ र भन्या ?
नेपाली जनताको सामूहिक विवेक जुन छ त्यो अत्यन्तै सकारात्मक रहेको मैले पाएको छु । विगतका घटनालाई हेर्नुहुन्छ भने २०४६ सालको आन्दोलनपछि त्यो बेलाको परिवर्तनकारी शक्ति कांग्रेस र एमालेलाई जनताले स्थापत गराए । २०६२।०६३ को आन्दोनपछि त्योबेलाको शक्ति माओवादीलाई प्रमुख शक्तिको रुपमा स्थापित गराए । जवकि त्यतिबेला उनीहरूको सांगठनिक संरचना बलियो थिएन । अहिले परिवर्तनको सट्टा मुलुक यथास्थितिमा रुल्मुलिइरहेको छ र यसले मुलुकलाई दुर्घटनातिर लगिराखेको छ । यथास्थितिको विरुद्धमा परिवर्तनकारी शक्तिको रुपमा राप्रपा नेपाल देखापरिराखेको छ । हामीले पुरानो व्यवस्था फर्काएन खोजेका होइनौं, हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र खोजेका हौं ।
० हैन पुरानो व्यवस्था फर्काउन खोजेको हैन पनि भन्नुहुन्छ अनि राजासहितको प्रजातन्त्र पनि भन्नुहुन्छ । यो भनेको के हो ? यो प्रतिगमनकारी सोच नै भएन र भन्या ?
यहींनेर आएर धेरैलाई भ्रम परेको छ । त्यो भ्रम चिर्न आवश्यक छ । हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र भनेको राजादेखि माओवादीसम्म अटाउनसक्ने भनेका हौं । विगतमा माओवादी नअटाएर संघर्षमा गए । नेपालको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा कसैलाई पनि निषेध गरेर शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । त्यसैले एउटा यस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ राजा संवैधानिक रुपमा, अभिभावकको रुपमा र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रुपमा रहने, शासन जनता र जनताका प्रतिनिधिहरूले गर्ने, नेपाली परिवेश अनुसारको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास राप्रपा नेपालको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । यो अग्रगामी विचार हो, पछाडि फर्कने होइन ।